Ustaaz Ahmaddiin Jabal Ziyaaraadhaaf gara godina Arsii lixaa imale - NuuralHudaa
Ustaaz Ahmaddiin Jabal Ziyaaraadhaaf gara godina Arsii lixaa imale
Last updated May 3, 2018 14
Ustaaz Ahmaddiin Jabal guyyaa hardhaa gara godina Arsii lixaa imale. Ustaaz Ahmaddiin fuula feesbuukii isaa irratti “Hidhaa Waggaa 5 fi baatii 7 booda yeroo duraatiif naanno Finfinneen ala konkolaatan Imalaa jira. Qabsoo mirga amantaatiif godhamee irratti warra maatiin isaani bara 2005 rasaasa mootumaatiin rukutamaniI jalaa wareegaman(Rabbin shahidummaa haakennuufi) ziyaruuf gara Kofaleefii Hasaasa imalan jira. Achumaanis yoo Rabbin jedhe sagantaa Qoree irrati hirmadheen debi’a” jechuun beeksise.
Ustaaz Ahmaddiin gara booda irratti akka beeksisetti ammoo, “Ummata Hasaasaa isaan bira dhufuu kiyya osoo hin beeksisin dhaqus, ummanni kumaatamaan lakkaahamu karaa dheeraa dhufuun nasimatan” jechuun ibse.
Daawwannaa Arsii Lixaa
Arsii LixaaOromiyaaUstaaz Ahmaddiin Jabal